ကြက်ဘဲအစာကြိတ်ခွဲစက်နှင့်အစာကျွေးခြင်း Crusher-Victor Pellet Mill အကြောင်း
ငါးလုံးလေးများပြုလုပ်သည်, လူအများစုကရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မယ်. ရေပေါ်မျောနေသောငါးအစာသည်လုံးလေးများကိုငါးများမှတစ်ဆင့်စားရန်မလွယ်ကူပါ. ဤအတောအတွင်း, လေထုကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။.
မတ်လတွင် ,VICTOR တောင့်စက်သည်အာဖရိကစားသုံးသူအတွက်ကြက်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုကမ်းလှမ်းထားသည်,အဓိကအားဖြင့် Mozambique.it သည်အဓိကအားဖြင့်ကြက်အစာတောင့်နှင့်နွားအစာကျွေးရန်ထုတ်လုပ်သည်။.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ခွေးအစားအစာပါဝင်မှုမှာအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်. စည်သွပ်ဘူးနှင့်ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများ၏အခြေခံကွာခြားချက်မှာအစိုဓာတ်ပမာဏဖြစ်သည်. စည်သွပ်ဘူးအစာအကြားပါရှိသည် 70 နှင့် 80% စိုထိုင်းဆ…… ...
ကြက်ဘဲအစာတောင့်သည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည် ,အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအာဟာရများအတွက်ကြက်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်. အစိမ်းရောင်အစာကိုအဓိကအားဖြင့်ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်ရန်အသုံးပြုသည်။.
Negeria ရှိငါးခူတောင်သူလယ်သမားများသည်စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနှင့်အတူလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည်, အရာတစ်နိုင်ငံလုံးထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်. အချို့သောလယ်သမားများကမူသူတို့၏လယ်မြေများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။.
ကြက်၊, ကသာကြက်သားသို့မဟုတ်ဝက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. ကြက်ဆင်ကဲ့သို့သောအခြားသူများအတွက်သင်ထည့်နိုင်သည်, ဘဲ, ကိုရီးယား, နွားစသည်တို့ကြက်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးဖြစ်သည်။.
အချို့ကြက်မွေးမြူသူများသည်ကြက်များကိုပြောင်းကဲ့သို့သောစပါးစေ့များဖြင့်ကျွေးလေ့ရှိသည်, Millet, ငရုတ်သီးစိမ်း, စသည်တို့. ၎င်းသည်အစာအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရုံသာမကကြက်များကိုပါထိခိုက်စေသည်။.
အစာကျွေးခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိနိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားအစာပါဝင်ပစ္စည်းများကြမ်းသီးနှံအစေ့များပါဝင်သည်, အမှုန်အရွယ်အစားလျှော့ချရန်လိုအပ်သည့်ပြောင်းဖူး ...... ...
12နောက်တစ်ခု »